Arakan Liberation Party » Archive
အစည်းအဝေးကို နံနက် ၀၉ နာရီမှ ညနေ ၀၄ နာရီထိ ကျင့်ပခဲ့ရာ အခမ်းအနာမှူး အဖြစ် ဦးဦးသိန်းမောင်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သဘာပတိများအဖြစ် … Read entire article »
ဆရာကြီး ခိုင်စံထွန်းအောင်သည် မိမိအသက်ကို မငဲ့ကွက်ပဲ အဖရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးနှင့် … Read entire article »
(၂) Arakan Rangers တပ်ရင်းမှူး … Read entire article »
ပတ်ဝန်း ကျင်မြင်ကွင်းတွေက ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေကို ညိုးနွမ်းစေ ပါပြီ။ မြဒေးကျွန်း ကို ပထမတစ်ကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့စဉ် မြင်ကွင်းနှင့် ယခုရောက်ရှိ စဉ်မြင်ကွင်းက ကွဲပြားနေတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကအစ အရာ အားလုံးပြောင်းလဲ သွားခဲ့တယ်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ကုန်ယူဝင့်ကြွားစွာ နေ့မအား၊ ညမအား တည်ဆောက်နေချိန်၊ တဖက်မှာတော့ … Read entire article »
Filed under: Arakan Article
ယခုအခါ မင်းပြားမြို့ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပြီး ဆေးစစ်ဆေးရ ယူနေသည်။ စစ်ဆေးချက်အသေးစိတ် မသိရသေးပါ။ မဌေးဌေးမြင့်မှာ ပျောက်ဆုံးစဉ်ကာလက ဆံပင်ရှိသူဖြစ်သော်လည်း ရှာဖွေသူများက … Read entire article »
ဒီကနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ် ကနေ စပြီး မိုင်းခွဲနေတယ်လို့ အဲဒီ မိုင်းခွဲတဲ့ နေရာ အနီးက ဒီကနေ့ … Read entire article »
ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးနိုင် ဦးစီးသော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ၁၅၊ ၂၊ ၂၀၁၃ မှ ၁၉၊၂၊၂၀၁၃ ထိ (၅) ရက်ကြာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တခုကိုသွားရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းခရီးစဉ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် (၇) ဦးပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုယ်စားလှယ်များမှာ-ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALA) ဗဟိုဌာနချုပ်မှ(၁)-ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးနိုင် Read entire article »
ကင်တားနား ၊ Ashok Migan တို.နှင့် စစ်တွေမြို.မိမြို.ဖ (၁၆)ဦး ၊ ကုလားတစ်အုပ်စု တို. ယနေ. ၁၂-၂-၂၀၁၃ နေ.လည် ၁း၃၀ နာရီ မှ ၃း၀၀ နာရီထိ စစ်တွေဟိုတယ် ၌ တွေ.ဆုံ ။ ထိုတွေ.ဆုံမှု သည် ဒေသခံရခိုင်များနှင့် ကင်တားနား တို.၏ ပထမဆုံး အကြိမ် … Read entire article »
သေဆုံးသူမှာ စစ်တွေ ဇာတိဖြစ်သူ ဦးမောင်အေးဖြစ်ပြီး … Read entire article »
မြန်မာ- ရခိုင် သမိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသာ ဗိုလ်မင်း KS ဖြူ (၇၈) နှစ် သည် လွန်ခဲ့သည့် ရက် ညနေပိုင်း အနည်းငယ်ဖျားနာရာမှ ရုတ်တရက် … Read entire article »
စစ်တွေမြို့ ချင်းပျံလမ်း ကျောင်းကြီးလမ်းရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ မောင်နေရင် ကျော်(အသက်-၂၅နှစ်)ဟာ စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာ … Read entire article »
အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒီဒေသဟာ ဝေးလံခေါင်းပါးတဲ့ … Read entire article »
သစ္စာအဓိဌာန် (၃) ရပ်	Slideshow	ဘင်္ဂလီများ၏ လူမျိုးဝါးမျို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်မည့် ဗျူဟာများလိုအပ်နေ	မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံတော်ဆီသို့ စစ်တွေတွင် ခိုင်သုခ၏ ပြည်သူလူထုကို ဟောပြောချက်	သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (statement)	ဖမ်းဆီးရသည့် ကုလားမှ လက်နက်ဟိသည်ဟိုဆို	စစ်သင်တန်း ဗွီဒီယိုဖိုင်တခု	Who's Online3 visitors online now1 guests,2bots,0members ဆောင်းပါးများ မြန်မာရို့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်က ရခိုင်ပြည် (၁၇၈၄-၁၈၂၄)